PressReader - Isolezwe: 2018-02-14 - Okuzokwenzeka uma uZuma ehla noma engehli esikhundleni
Isolezwe - 2018-02-14 - IZINDABA -
Kudingeka amavoti angaphezu kuka-200 amchithayo ePhalamende elinezihlalo eziwu400 ukuze ehle esikhundleni. Uma limudla ivoti kudingeka ukuthi aphume nesigungu sakhe soNgqongqoshe namaphini abo. Iphini lakhe, uMnuz Cyril Ramaphosa, naye uyaphuma esikhundleni.
Uma sekunjalo izintambo zokuhola izwe zizobanjwa nguSomlomo wePhalamende ngoba umengameli uzobe engekho izinsuku eziwu30 ngaphambi kokuthi kuhlale iPhalamende kukhethwe umengameli omusha. Umengameli ube esekhetha iphini likamengameli bese ekhetha nesigungu soNgqongqoshe bakhe.
Isithombe: MATTHEWS BALOYI/AFRICAN NEWA AGENCY/ANA
IPHINI likaNobhala we-ANC uNksz Jessie Duarte noNobhala-Jikelele, uMnuz Ace Magashule, esithangamini sabezindaba eGoli izolo lapho bememezele ukuthi isigungu esiphezulu sale nhlangano sesinqume ukukhomba indlela uMengameli Jacob Zuma kuhulumeni